Myrtle Beach နှင့် US ရှိငါ့အနီးတွင်အကောင်းဆုံးပင်လယ်စာဆိုင် ၂၅ ဆိုင်
By ဗစ်တိုးရီးယား Akpan TMLT စက်တင်ဘာလ 16, 2021 အစားအသောက်များ, ခရီးသွား0မှတ်ချက်
- ကျွန်ုပ်အနီးရှိပင်လယ်စာစားသောက်ဆိုင်များ -
သင်ယဉ်ကျေးသော ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အတူကျော်ကြားသောပင်လယ်စာစားသောက်ဆိုင်များနှင့်အတူဇိမ်ခံကမာစားသောက်ဆိုင်များကိုရှာဖွေနေရင်တောင် တိုက်ရိုက်ဂီတဖျော်ဖြေပွဲများနှင့်သမိုင်း၎င်းတို့အားလုံးသည်အကောင်းဆုံးပင်လယ်စာနှင့်ဒေသဆိုင်ရာအထူးအစားအစာများကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။
ဤဆုရစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ဂန္ထဝင်ပုစွန်ဟင်းလျာများ၊ ဒေသတွင်းအကြိုက်ဆုံးများနှင့် tavern-style menu အနည်းငယ်တို့ကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိထိပ်တန်းပင်လယ်စာစားသောက်ဆိုင် ၂၅ ဆိုင်နှင့် Myrtle Beach တို့ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်အကောင်းဆုံးပင်လယ်စာစားသောက်ဆိုင် ၁၅ ဆိုင်
၁။ ပင်လယ်စာစားသောက်ဆိုင်များ၊ ဝါရှင်တန်ဒီစီ Fiola Mare
Fabio Trabucchi ၏ Fiola Mare ၎င်းသည်မြေထဲပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းတစ်ဝိုက်တွင်ရရှိနိုင်သောအကောင်းဆုံးစားသောက်မှုအတွက်လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အီတလီပင်လယ်စာများ၏အရသာသည်ရာသီအလိုက်ထုတ်ကုန်များ၏လတ်ဆတ်မှုကိုအခွင့်ကောင်းယူသောမပြောင်းလဲသောမီနူးတစ်ခုဖြင့်သတ်မှတ်သည်။
မီနူးသည်အရောင်တောက်တောက်ဖြင့်ရှိသည် လတ်ဆတ်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏ဆွဲဆောင်မှုရှိသောပြင်ဆင်ထားသောဟင်းလျာများပင်လယ်စာများ၊ နံရိုးကင်အသားများ၊ အော်ဂဲနစ်ကုန်ကြမ်းအရည်များ၊ နူးညံ့သောအချိုပွဲများနှင့်ခမ်းနားသောအချိုပွဲများ
ပင်လယ်၏တောက်ပမှုနှင့်ရိုးရှင်းသောသန့်စင်မှုတို့မှုတ်သွင်းထားသောကော့တေးလ်များကိုဘားတွင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ အရက်နှင့်စပျစ်ဝိုင်များကိုအီတလီနှင့်အမေရိကန်နှင့်နိုင်ငံတကာဓလေ့ထုံးတမ်းများမှလွှမ်းမိုးမှုနှင့်အရသာနှင့်လတ်ဆတ်မှုတို့ကိုအလေးပေးဖော်ပြခဲ့သည်။
3050 K Street NW, Suite 101, Washington DC 20007, ဖုန်း: 202-525-1402
Hogfish Bar နှင့် Grill ၎င်းသည် Florida Keys ရှိဒေသပိုင်စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးကမ္ဘာအနောက်ပိုင်းပုံစံအတိုင်းနှင့်အနောက်အနောက်အရသာကိုပေးသည်။
လှေမှစားပွဲခုံများနှင့်ပန်းကန်ပြားသေးသေးလေးများ ပင်လယ်စာအထူးသဖြင့် calamari ကြော်ကဲ့သို့ နှင့် ceviche ကိုဤအပန်းဖြေဒေသ Hangout တွင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။
စားဖိုမှူးများ၏ထူးခြားချက်များမှာခရုသင်းကြော်များနှင့်မာကျောသောပါးများပါ ၀ င်သောနာမည်ကျော် Florida ဟင်းလျာများဖြစ်သည်။
နာမည်ကျော်ဟင်းကို swiss cheese၊ ကြက်သွန်နီနှင့်မှိုတို့နှင့်လတ်ဆတ်သောကျူးဘားပေါင်မုန့်ပေါ်တွင်တည်ခင်းဧည့်ခံပြီး scallops နှင့်အရသာတူသည်။ ဆန်နှင့်ပဲအမျိုးမျိုးတို့နှင့်အတူ Baja ပုံစံ tacos ၏အကွာအဝေးသည် taco ပရိသတ်များကိုကျေနပ်စေလိမ့်မည်။
6810 ရှေ့လမ်း၊ စတော့ကျွန်း၊ FL 33040၊ ဖုန်း-၃၀၅-၂၉၃-၄၀၄၁
Charleston ရှိ ၁၆၇ ကုန်ကြမ်းသည် Nantucket ၏မူလကမာကရက်ဘားနှင့်ပင်လယ်စာစျေးကွက်၏လည်ပတ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အေးမြသောခရုကမာများကိုအေးမြသောရေမှနှုတ် ယူ၍ တောင်ပိုင်းရှိစတိုင်ကျသောဤစားသောက်ဆိုင်တွင်ချက်ပြုတ်သည်။
ခရုကမာကောင်ကိုအခွံမှပြုတ်။ မီးဖွင့်ရာမှထွက်လာသောမီးခိုးများသည်အချိုနှင့်အငန်အရသာကိုတိုးတက်စေသည်။ ကျောက်ပုစွန်လိပ်များ၊ တူနာဘာဂါများနှင့်ငါး tacos အပါအ ၀ င်ဒေသထွက်အထူးဟင်းလျာများကို 167 Raw တွင်ရနိုင်သည်။
ဧည့်သည်များသည်ဆွတ်ဆွတ်ဖြူသောထိုင်ခုံ ၁၂ ခုံသို့မဟုတ်နွေးထွေးသောပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ရောနှောသောစကားဝိုင်းနှစ်ခုမှတစ်ခုတွင်ထိုင်နိုင်သည်။
193 King St, Charleston, SC 29401, ဖုန်း: 843-579-4997
Matunuck Oyster Bar သည် Rhode Island မှအကြီးမားဆုံးကမာများ၊ ချယ်ရီကျောက်များ၊ လည်တိုင်များနှင့်ပုစွန်များနှင့်ပြည့်နေသည်။ စားသောက်ဆိုင်၏ကန်ရေပြင်မှပန်းကန်ကမာများကိုလယ်ယာမှစားပွဲတင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်တွဲဖက်ထားသည်။
သို့သော်အကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများကိုပြုလုပ်ရန်ကြီးစွာသောစောင့်ရှောက်မှုကိုပြုလုပ်ထားသည် အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးပင်လယ်စာနှင့်အော်ဂဲနစ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုမွေးမြူပါမရ။ မီနူးတွင် classic calamari appetizers များအပြင်မုန်လာဥနီနှင့် vinaigrette တို့ပါ ၀ င်သောတစ်မျိုးမျိုး quinoa ဂဏန်းသုပ်ရှိသည်။
သူတို့လယ်ယာမှဒေသခံပင်လယ်စာများနှင့်အော်ဂဲနစ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုဟင်းချို၊ အသုပ်နှင့်အသားညှပ်ပေါင်မုန့်များတွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ Jambalaya သည် Alaskan king crab ခြေထောက်များကိုရရှိနိုင်သောပင်လယ်စာအနည်းငယ်သာဖြစ်သည်။
အကင်၊ spaghetti နှင့်ကြက်သားဟင်းမျိုးစုံတို့က menu ကိုပြည့်စုံစေသည်။
629 Succotash လမ်း, South Kingstown, RI 02879, ဖုန်း: 401-783-4202
၅။ Angry Crab Shack, Mesa/Phoenix, Arizona
Sun of the Valley ၌အကြီးမြတ်ဆုံး cajun ဟင်းလျာများကိုနေရာ ၁၀ ခုဖြင့်ပို့ဆောင်ပေးသည်။ Mesa ရှိ Angry Crab Shackအရီဇိုးနားပြည်နယ်သည်ပင်လယ်စာ၏ကျော်ကြားမှုဟုဆိုကြသည်။
ထို့အပြင်နေ့လည်စာ menu တွင် gumbo (သို့) clam chowder နှင့်လတ်ဆတ်သောအသုပ်အနည်းငယ်တို့ပါ ၀ င်သည်။
ဧည့်သည်များအနေဖြင့်၎င်းတို့၏အသား (သို့) ကြွပ်ကြွပ်တို့ဟူးနှင့်ငံပြာရည်တစ်ခွက်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပြီးအရသာနှင့်ပြည့်စုံသောအမြန်ထမင်းတစ်နပ်အတွက်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ တစ်နေ့တာလုံးသုံးနိုင်သောညနေစာ menu တစ်ခုလုံး, ပင်လယ်စာ appetizers ၏ကြီးမားသောရွေးချယ်ရေးနှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ အသားညှပ်ပေါင်မုန့်များ၊ ပင်လယ်စာပန်းကန်များနှင့်၎င်းတို့၏ထူးခြားသောကြော်များနှင့်အတူညစာစားပွဲများကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
2740 S Alma School Rd, Mesa AZ 85210, ဖုန်း: 480-730-2722
၆။ Bob's Clam Hut, Kittery, Maine
၎င်းသည် USA ရှိအကောင်းဆုံးပင်လယ်စာစားသောက်ဆိုင်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Bob's Clam Hut သည် ၁၉၅၆ တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး Route One သည်ယနေ့တိုင်စည်ကားသိုက်မြိုက်သောစျေး ၀ ယ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
နေ့တိုင်း Bob's clams များသည်လတ်ဆတ်မှုရှိစေရန်လတ်ဆတ်သည် အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးလက်ဖြင့်ရွေးချယ်ထားသောပင်လယ်စာများမရ။ ကျောက်ပုစွန်စွပ်ပြုတ်နှင့်ဘော့၏လက်မှတ်ကြော်ဂုံးများကဲ့သို့မီနူးပစ္စည်းများသည် Bob ၏မူလချက်ပြုတ်နည်းများကို အသုံးပြု၍ ပြင်ဆင်ဆဲဖြစ်သည်။
Bob's Clam Hut သည်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဓာတ်ငွေ့နှင့်ပျက်စီးလွယ်သောပစ္စည်းများနှင့်ပလပ်စတစ်အစားထိုးပစ္စည်းများ အသုံးပြု၍ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကိုကတိပြုသည်။
315 US-1, Kittery, ME 03904, ဖုန်း: 207-439-4233
၇။ ပင်လယ်စာစားသောက်ဆိုင်များ၊ Red Fish Grill, New Orleans, LA
လတ်ဆတ်သောရာသီပေါ်ငါးများနှင့်ပင်လယ်စာများကို Red Bourbon Street ၏ပထမ block တွင်တည်ရှိသည်။ အဏ္ဏဝါများနှင့်အဏ္ဏဝါသက်ရှိအနုပညာလက်ရာများပါ ၀ င်သောအုတ်နံရံများပါ ၀ င်သောကြီးမားသောကမာနှင့်ကော့တေးဘားတွင်ထိုင်နိုင်သည်။
လယ်ယာမှလတ်ဆတ်သောပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်ဒေသခံတံငါသည်များ၏ဖမ်းခြင်းကိုသုံးသည် bbq oysters ကဲ့သို့ထူးခြားသောအစားအစာများကိုဖန်တီးပါမိကျောင်းဝက်အူချောင်းနှင့် hickory မီးကင်ငါးနှင့်ပင်လယ်စာ gumbo ။
Red Fish Grill ရဲ့ချစ်စရာကောင်းနှစ်ထပ်ချောကလက်ပေါင်မုန့်ပူတင်းသည်မည်သည့်ညစာအတွက်မဆိုပြီးပြည့်စုံသောအဆုံးသတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ နေ့လည်စာအတွက်စွပ်ပြုတ်များ၊ အသုပ်များနှင့်အသားညှပ်ပေါင်မုန့်များရရှိနိုင်ပါသည်။
115 Bourbon St, New Orleans, LA 70130, ဖုန်း: 504-598-1200
၈။ Le Bernardin၊ New York၊ NY
၎င်းသည် USA ရှိအကောင်းဆုံးပင်လယ်စာစားသောက်ဆိုင်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Maguy နှင့် Gilbert LeCoze တို့သည်ပါရီတွင် Le Bernardin ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီးစားသောက်ဆိုင်၏ချက်ချင်းအောင်မြင်မှုသည် New York သို့တိုးချဲ့ခဲ့သည်။
ဧည့်သည်များအနေဖြင့် Chef Tastings မျိုးစုံ၊ ဝိုင်တွဲများ၊ မပါ၊ ၃ သင်တန်းနေ့လည်စာများနှင့် menu ၄ ခုပါသောညစာများကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
ထို့အပြင်စားသောက်ဆိုင်၏ပူဇော်သက္ကာများကို ၂၀၁၄ ၌အထူးပွဲများနှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းစုဝေးပွဲများအတွက်ရှုပ်ထွေးသောပွဲလမ်းသဘင်တစ်ခုထပ်တိုးခဲ့သည်။
ကြီးထွားလာသောဝိုင်စာရင်းနှင့်အတူပေါ့ပါးသောမီနူးများနှင့်ဝေမျှနိုင်သော appetizers များဖြင့်အဆင့်မြင့်ဝိုင်ဘားကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
155 W 51st St, New York, NY 10019, ဖုန်း: 212-554-1515
၉။ Coni's Seafood, Inglewood, CA
Coni's Seafood သည်မက္ကဆီကိုမှတင်သွင်းသောလတ်ဆတ်သောပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူ Nayarit စတိုင်မက္ကဆီကန်ပင်လယ်စာစစ်စစ်ကိုပြင်ဆင်သည်။
Coni's Seafood သည် Inglewood ရပ်ကွက်၌ဆုရခဲဖွယ်ဟင်းပွဲများကိုသူ့ဥယျာဉ်တွင်စတင်ပြီးသမီးဖြစ်သူအားပေးအပ်ခဲ့သည်။
မီနူးကို ceviche appetizers နှင့်စတင်သည် အခြားပန်းကန်ပြားလေးများပင်လယ်စာဂန္ထဝင် campechana နှင့် marlin tacos ကဲ့သို့။
သူတို့၏ပုစွန်အစားအစာများသည်ထောပတ်ကြက်သွန်ဖြူ၊ အနီရောင်ပူပူနွေးနွေးနှင့် jalapeno နှင့်ဒိန်ခဲနှင့်အချဉ်မုန့်တို့နှင့်အရသာမျိုးစုံရှိသည်။ လတ်ဆတ်သောညှစ်ထားသောသံပယိုရည်နှင့်မက္ကဆီကန်ဘီယာများပါ ၀ င်သောအချိုပွဲများထဲတွင်ပါ ၀ င်သည်။
3544 West Imperial Highway, Inglewood, CA 90303, ဖုန်း: 310-672-2339
10. ပင်လယ်စာစားသောက်ဆိုင်များ - Mama's Fish House, Paia, HI
Floyd နှင့် Doris Christenson တို့သည်အဆုံးစွန်ကျွန်းအိမ်ကိုရှာဖွေရန်လေးနှစ်ကြာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာသို့ခရီးနှင်ခဲ့ပြီး Mama's Fish House သည်သူတို့၏အိမ်မက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
Maui ၏အကင်ပင်လယ်များထဲတွင်လူငယ်မိသားစုသည် ၁၉၇၃ တွင်လတ်ဆတ်သောငါးစားသောက်ဆိုင်ကိုစတင်ခဲ့သည်။ Mama's Fish House သည် Polynesian စတိုင်အစားအစာများကိုဒေသခံငါးဖမ်းသူများ၏နေ့စဉ်ဖမ်းခြင်းမှအစပြုသည်။
အပူပိုင်းဒေသ Ono၊ လှပသောအရောင်အသွေးစုံ Mahi-Mahi နှင့် Lehi၊ Uku နှင့် Onaga ကဲ့သို့သောသန္တာကျောက်တန်းများသည်နေ့စဉ်ခေါ်ဆောင်လာသောငါးများထဲတွင်ပါဝင်သည်။ နေ့စဉ်မီနူးတွင်အမေကဲ့သို့ချစ်စဖွယ်ပြင်ဆင်ထားသောဒေသခံတံငါသည်များ၏လတ်ဆတ်သောဖမ်းစားမှုများပါ ၀ င်သည်။
799 Poho Place, Paia, HI 96779, ဖုန်း: 808-579-8488
၁၁။ Mariscos Chihuahua, Tucson, AZ
Chihuahua Seafood ကိုစတင်စားခဲ့သည် ceviche ကျွေးသောမိသားစုအစားအစာအတွက်သေးငယ်သောအထောက်အပံ့မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ၊ Nogales ရှိနာမည်ကျော်သစ်သီးဆိုင်ဘေးတွင်၊ ပင်လယ်စာနှင့်ကော့တေးလ်များ
မိသားစုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည်အရီဇိုးနားသို့ပြောင်းရွှေ့သောအခါ Mariscos Chihuahua လုပ်ခဲ့သည်။ မျိုးဆက်များနောက်ပိုင်းတွင်မိသားစုသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၅၀ နီးပါးကကျော်ကြားစေသောရိုးရာချက်ပြုတ်နည်းများကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်၊ သူတို့၏ ceviche၊ သံပုယိုရည်တွင်ပုစွန်များနှင့်ခရမ်းချဉ်သီး၊ ကြက်သွန်နီ၊ သခွားသီးနှင့်ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များပါ ၀ င်သည်။
ညနေစာ menu တွင်ငါး၊ ပုစွန်၊ ကြက်သားညစာတို့ကိုအသုပ်၊ ဆန်နှင့်အာလူးတို့ဖြင့်တည်ခင်းဧည့်ခံသည်
1009 N Grande Ave, Tucson, AZ 85745, ဖုန်း: 520-623-3563
Safe Harbor Seafood Market & Restaurant သည်နေ့စဉ်ပိတ်မိနေသော Jacksonville ဧရိယာတွင်အကောင်းဆုံးပင်လယ်စာအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုပြီးအလွတ်သဘောလေထုထဲတွင်ပြင်ဆင်ထားသည်။ ၂၅ နှစ်ကျော်ပြီ၊ စျေးကွက်သည်လတ်ဆတ်သောငါးများနှင့်ဒေသခံငါးများကို Atlantic အသိုင်းအဝိုင်းများသို့ရောင်းချခဲ့သည်။
ထို့အပြင်မီနူးတွင် gator queue နှင့်ပုစွန် nachos ကဲ့သို့အာလူးကြော်၊ ဂေါ်ဖီထုပ်နှင့်ဆိတ်ဆိတ်ခွေးပေါက်တို့ပါ ၀ င်သောထမင်းစားပွဲများစွာပါ ၀ င်သည်။ ဟင်းချိုများ၊ အသုပ်များ၊ tacos နှင့်အသားညှပ်ပေါင်မုန့်များသည်ရရှိနိုင်သည့်အရသာနှင့်စတိုင်လ်များစွာကိုပေးသည်။
4378 Ocean Street #3, Mayport, FL 32233, ဖုန်း: 904-246-4911
၁၃။ Pacific Beach Fish Shop, San Diego, CA
Pacific Beach Fish Shop သည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်၏အဆန်းသစ်ဆုံးဖမ်းစားမှုဖြင့် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်၎င်း၏တံခါးများကိုပထမဆုံးဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ၀ ယ်ယူသူများသည်ငါးနှင့်ပင်လယ်စာအမျိုးမျိုးကို build-your-own menu တွင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
ထို့နောက်ကင်ထားသောသို့မဟုတ်ကြော်ထားသော tacos များ၊ အသုပ်များ၊ အသားညှပ်ပေါင်များသို့မဟုတ်ညစာပန်းကန်ကဲ့သို့ marinade နှင့်တင်ဆက်မှုရွေးချယ်ပါ။
Fish Shop အကြိုက်ဆုံးများမှာ Pineapple Express taco နှင့်Poké Bowl တို့ပါဝင်ပြီးပဲပိစပ်ဆော့စ်တွင်စိမ်ထားသော Ahi လတ်ဆတ်သောအစိမ်းရောင် Ahi တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော Sriracha aioli နှင့် avocado lime drizzle တို့ဖြင့်သခွားသီးနှင့် wontons တို့ဖြင့်စံပြဆန်ကိုတည်ခင်းပါ။ မရ။
1775 Garnet Ave, 92109 San Diego, ဖုန်း: 858-483-1008
၁၄။ Providence, Los Angeles, CA
၎င်းသည် USA ရှိအကောင်းဆုံးပင်လယ်စာစားသောက်ဆိုင်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Providence သည်ပြည်တွင်းဖြစ်အကောင်းဆုံးပင်လယ်စာများကိုသန့်ရှင်းလတ်ဆတ်မှုနှင့်လေးစားမှုတို့ဖြင့်ပြင်ဆင်ထားသည်။
သို့သော်လည်းအနာဂတ်မျိုးဆက်များအတွက်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကိုထိန်းသိမ်းရန် Chef Cimerusti သည်တောဖမ်းမိသောပစ္စည်းများကိုသာအသုံးချရန်အခိုင်အမာပြောကြားခဲ့သည်။ အမေရိကန်ရေပိုင်နက်မှရေရှည်တည်တံ့သောပင်လယ်စာနှင့်ငါးများ.
နေ့လည်စာ menu တွင်အခွံတစ်ခြမ်းပါ ၀ င်သောကမာကောင်များနှင့် clit fritters များအပြင် Vermilion Rockfish နှင့်လေးဆင့်အရသာမြည်းစမ်းနိုင်သော menu တို့ပါ ၀ င်သည်။
ညစာဘူဖေးသည်လယ်ယာမှမွေးမြူထားသော caviar နှင့်ခေါက်ဆွဲ၊ risotto (သို့) omelette တို့ဖြင့်ကျွေးမွေးသောအီတလီအဖြူရောင် truffles ကဲ့သို့သောဟင်းလျာများဖြင့်စတင်သည်။ Providence သည်ညနေခင်းတွင်ဝိုင်နှင့်မတွဲဘဲအရသာသုံးမျိုးကိုပေးသည်။
5955 Melrose Avenue, Los Angeles, CA 90038, ဖုန်း: 323-460-4170
၁၅။ Pêche Seafood Grill, New Orleans, LA
စားဖိုမှူးများဖြစ်သော Donald Link, Stephen Stryjewski နှင့် Ryan Prewitt တို့သည် P Americache Seafood Grill ကိုတောင်အမေရိက၊ စပိန်နှင့် Gulf Coast တို့မှလွှမ်းမိုးမှုများဖြင့်ဖန်တီးခဲ့သည်။
မီနူးတွင်လတ်ဆတ်သောဒေသခံငါးများနှင့်ရေရှည်တည်တံ့သောမွေးမြူရေးသုံးပစ္စည်းများကို သုံး၍ ဖွင့်ထားသောမီးဖိုပေါ်တွင်ချက်ပြုတ်ထားသောဂန္ထဝင်ပင်လယ်စာများနှင့်ကမ္ဘာဟောင်းချက်ပြုတ်နည်းများပါ ၀ င်သည်။
ပင်လယ်စာသုပ်နှင့်ကဏန်းခြေသည်းများပါသောအစိမ်းရောင်ဘားထမင်းစားရန်ပန်းကန်ပြားသေးသေးလေးများနှင့်ခဲတံများ၊ စွပ်ပြုတ်များနှင့်လတ်ဆတ်သောအသုပ်များ၊ Louisianna ငါးခူနှင့်ပင်လယ်စာပုစွန်တို့ဖြင့်ညစာစားပွဲသည်
“ New Orleans ၏လူငယ်များအားအာဟာရဖြန့်ဖြူးရန်ကူညီပံ့ပိုးရန်ရည်ရွယ်သော The Link Stryjewski Foundation” သည်ရပ်ရွာအားပြန်လည်ပေးသောဆုရစားသောက်ဆိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။
800 မဂ္ဂဇင်း St, New Orleans, LA 70130, ဖုန်း: 504-522-1744
Myrtle Beach တွင်အကောင်းဆုံးပင်လယ်စာစားသောက်ဆိုင် ၁၀ ဆိုင်
Myrtle Beach ရှိအခြားပင်လယ်စာစားသောက်ဆိုင်များအကြောင်းလေ့လာရန်ဆက်ဖတ်ပါ။
၁၆။ Captain George's Seafood Restaurant
၎င်းသည် Myrtle ကမ်းခြေရှိအကောင်းဆုံးပင်လယ်စာစားသောက်ဆိုင်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Captain George's Seafood စားသောက်ဆိုင် အမေရိကရဲ့ထိပ်တန်း ၁၂ ယောက်လုံးစားလို့ရတဲ့ပင်လယ်စာဘူဖေးတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးကတိပေးထားတဲ့ပီတိနဲ့ ၀ မ်းဗိုက်ကိုပွတ်တိုက်ကျေနပ်ရောင့်ရဲစေမှာပါ။
ကပ္ပတိန်ဂျော့ခ်ျသည်၎င်း၏စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သောပတ်ဝန်းကျင်၊ ရည်မွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောအစားအစာများ၊ ကမ်းခြေရှိ Broadway မှကျောက်တုံးကြီးတစ်ခုနှင့်သာတည်ရှိသည်။
First Catch တွင်ဘူဖေးများသည်စျေးနှုန်းချိုသာပြီးမိသားစုများသည်၎င်းကိုလေ့လာရန် ၀ မ်းသာလိမ့်မည် အသက်လေးနှစ်အောက်ကလေးများအခမဲ့စားခွင့်ရှိသည် လူကြီးဘူဖေး ၀ ယ်တဲ့အခါ
1401 29th Avenue, North Myrtle Beach, South Carolina, Phone: 843-916-2278
Rockefellers Raw Bar တွင်သင်ရှာသမျှကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ North Myrtle Beach တွင်တည်ရှိသော Rockefeller Raw Bar သည် ၀ န်ထမ်း၏ ၀ န်ဆောင်မှုအထူးကောင်းမွန်ခြင်းနှင့်မီးဖိုချောင်မှနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောပန်းကန်ပြားတစ်ခုစီတို့ဖြင့်ပြည့်စုံသည်ဟုကတိပြုသည်။
ဒါ့အပြင် စားသောက်ဆိုင်တွင်တူနာ၊ ကျောက်ပုစွန်၊ ဂုံးကောင်၊ ခရုတို့စားသည်ပင်လယ်စာများ၊ ခုံးကောင်များနှင့်ဂဏန်းငါးများအပြင်ငံပြာရည်တို့ဖြင့်ပူပူနွေးနွေးချက်ပြုတ်ပြီးမယုံနိုင်လောက်အောင်အရသာရှိလှသည်။
Rockefellers Raw Bar ၏ပတ် ၀ န်းကျင်သည်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းပြီးညစာစားသူများသည်အဖျော်ယမကာပြင်ဆင်ပြီးမီးဖိုချောင်အလုပ်လုပ်နေစဉ်စားသောက်ဆိုင်၏ဇိမ်ခံကပ္ပတိန်ထိုင်ခုံတစ်ခုတွင်အနားယူရန်တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
၃၆၁၃ အဝေးပြေးလမ်း ၁၇ တောင်၊ North Myrtle Beach, South Carolina, Phone: ၈၄၃-၃၆၁-၉၆၇၇
၃။ Dirty Don's Oyster Bar & Grill
Dirty Don's Oyster Bar နှင့် Grill Myrtle Beach တွင်တည်နေရာနှစ်ခုပါ ၀ င်သော West West စတိုင်စားသောက်ဆိုင်ဖြစ်သည်၊ တစ်ခုသည် boardwalk တစ်လျှောက်နှင့် Myrtle Beach ၏အလယ်ဗဟိုတွင်ရှိသည်။ ၎င်းသည်ပူသောအတောင်ပံများမှအခွံတစ်ဝက်အထိလတ်ဆတ်သောကမာကောင်များအထိအရာအားလုံးကိုကူညီသည်။
ဒေသခံများနှင့်ဧည့်သည်များသည်သူတို့၏ဟင်းလျာများကိုမြည်းစမ်းရန်အထူးသဖြင့်နာမည်ကျော် Dunkin 'Pot ကိုအမှိုစာများ၊ ပြောင်းဖူးများ၊ ပြောင်းဖူးများ၊ ပြောင်းဖူးများ
သင်သွားသောနေရာတိုင်းတွင်အစားအစာသည်မခွဲခြားဘဲအလွန်ကောင်းမွန်သည်။ စားသောက်ဆိုင်သည် TripAdvisor မှ Excellence Certificate ကိုတောင်ရခဲ့သည်။ ဒီတပတ်လုံးမှာသူတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်စရာနာရီနဲ့ကမာကောင်ကင်တွေကိုလက်လွတ်မခံပါနဲ့။
408 21st Avenue North နှင့် 910 North Ocean Boulevard, Myrtle Beach, South Carolina, Phone: 843-448-4881
၁၉။ Preston's Seafood ဘူဖေး
Preston ပင်လယ်စာဘူဖေး ပင်လယ်စာဝါသနာအိုးတစ်ယောက်ရဲ့အိမ်မက်ကတကယ်ဖြစ်လာတယ်။ စားသောက်ဆိုင်သည်ဒေသခံများနှင့်ခရီးသွားများအတွက်ကြောက်စရာကောင်းသောစားစရာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ အရသာရှိသောအစားအစာများ၊ ထိုဒေသတွင်အကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုအချို့နှင့်ကြိုဆိုသောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုပါ ၀ င်သည်။
ကြီးမားသောဘူဖေးတွင်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောငါးများနှင့်အရည်ရွှမ်းသောအမဲသားများအပြင်အရသာရှိသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်လတ်ဆတ်သောဖုတ်ထားသောပေါင်မုန့်လိပ်များပါ ၀ င်သည်။
စိမ်းလန်းသောအပင်များ၊ အရောင်အသွေးစုံသောအသီးများ၊ ၀ တ်စုံများစွာနှင့်ပုစွန်၊ ခရုခွံသုပ်၊ ခေါက်ဆွဲသုပ်နှင့်အအေးပုစွန်ကဲ့သို့သောခဲဖွယ်များပါ ၀ င်သော Preston ၏ကြီးမားသောအသုပ်ဘားသည်စားသောက်ဆိုင်၏အဓိကဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
5. Seafood World ဘူဖေး
၎င်းသည် Myrtle ကမ်းခြေရှိအကောင်းဆုံးပင်လယ်စာစားသောက်ဆိုင်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Seafood World ဘူဖေးတွင်ခရီးသွားတိုင်းသည်အကောင်းဆုံးအားလပ်ရက်ညစာကိုတွေ့လိမ့်မည်။ Seafood World သည်၎င်း၏လတ်ဆတ်သောပင်လယ်စာများ၊ ထိပ်တန်းအသားများနှင့်ဒေသထွက်အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များကြောင့်နာမည်ကြီးသည်။
နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ပြင်ဆင်ထားသောပြီးပြည့်စုံသောသို့မဟုတ်အရသာရှိသောပင်လယ်စာများသို့ကင်ထားသောအရည်ရွှမ်းသောအသားများကိုခံစားပါ။ ဘူဖေးတွင်အရာ ၁၀၀ ကျော်ပါ ၀ င်သောအစားအစာတိုင်းကို ဦး စားပေးလိမ့်မည်မှာသေချာသည်။
ညစာစားသူတစ် ဦး သည်ဘူဖေးမှစားရခြင်းကိုမခံစားရလျှင် Seafood World ၏ala carte menu သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။
ပေါင်တစ်ပေါင်အတွက်ကဏန်းခြေထောက်များ၊ ပင်လယ်စာ kabob များ၊ ပုဇွန်လုံးပန်းကန်လုံး၊ ကမ္ဘာ့ပင်လယ်စာပန်းကန် (သို့) ပုစွန် scampi တို့ကဲ့သို့ဂန္တ ၀ င်နှင့်စတင်ပါ။
411 North Kings Highway, Myrtle Beach, South Carolina, Phone: 843-626-7896 တွင်တည်ရှိသည်
6. Chesapeake အိမ်
Chesapeake အိမ် အကောင်းဆုံးပင်လယ်စာနှင့် USDA အကင်များကိုနှစ်ပေါင်း ၄၀ ကျော်ပေးခဲ့ပြီး၎င်းသည် ၁၉၇၁ ကတည်းကမိသားစုပိုင်ဖြစ်သည်။
ညစာစားပွဲတစ်ခုအတွက် ဦး လေးဘီလ်၏ကျော်ကြားသောငါးစွပ်ပြုတ်ကိုစမ်းကြည့်ပြီးစားသောက်ဆိုင်၏အိမ်လုပ်အသုပ် ၀ တ်စုံများကိုနမူနာယူရန်မမေ့ပါနှင့်။
Bakery မှာနေ့တိုင်းလတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ဖုတ်ထားတဲ့ Chesapeake House ရဲ့နာမည်ကျော်သစ်ကြံပိုးခေါက်အနည်းငယ်နဲ့မင်းရဲ့အစားအစာကိုပြီးအောင်လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့။
တည်ရှိသည်: ဖုန်းနံပါတ်-၈၄၃-၄၄၉-၃၂၃၁၊ ၉၉၁၈ အဝေးပြေးလမ်း ၁၇ မြောက်၊ မုရန်ကမ်းခြေ၊ တောင်ကယ်ရိုလိုင်းနား
၂၂။ Bimini's Oyster Bar နှင့် Seafood Cafe
ဘယ်အချိန်မှာအဲဒါကိုမှကြွလာ Bimini's Oyster Bar နှင့်Caféမကောင်းတဲ့နေ့တွေမရှိဘူး။ ၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးတံခါးဖွင့်ခဲ့သော Bimini's သည်ပြည်နယ်၏အလတ်ဆတ်ဆုံးပင်လယ်စာနှင့်ငါးများကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်နှစ်ပေါင်း ၃၀ နီးပါးကျွန်းများကိုအရသာနှင့်ခံစားမှုကိုသယ်ဆောင်လာခဲ့သည်။
ဧည့်သည်များသည်သာယာသော ၀ န်ထမ်းများ၊ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောစားသောက်ဆိုင်၊ ကျယ်ပြန့်သောသောက်စရာမီနူးနှင့်အကကိုလှုံ့ဆော်သောတိုက်ရိုက်ဂီတကိုမျှော်လင့်နိုင်သည်။
ကမာကောင်တစ်ဝက်၊ ဂုံးကောင်များ၊ ဂုံးများ၊ တောက်ပသောပုစွန်လေးပုံတစ်ပုံ၊ ကြမ်းခြေထောက်တစ်ပေါင်နှင့် Bimini ၏အတွေ့အကြုံတစ်ခုလုံးအတွက် cob အဖြစ်ပြောင်းဖူးပါ ၀ င်သောအထူးဟင်းလျာကိုရွေးချယ်ပါ။
Bimini ကျွန်းသို့ကုန်းတွင်းသို့မောင်းပြီး Bimini's ရှိကျွန်းပေါ်ရှိအကြီးမြတ်ဆုံးပင်လယ်စာအချို့ကိုစားသောက်ပါ။
၉၃၀ Lake Arrowhead Rd, Myrtle Beach, South Carolina, Phone: 930-843-449
8. Pier 14 စားသောက်ဆိုင်နှင့် Lounge
၎င်းသည် Myrtle ကမ်းခြေရှိအကောင်းဆုံးပင်လယ်စာစားသောက်ဆိုင်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Pier 14 စားသောက်ဆိုင်နှင့် Lounge ဖြစ်ရပြီ အကောင်းဆုံးအစားအစာအချို့ကိုကျွေးသည် ၁၉၈၅ ခုနှစ်မှစ၍ Myrtle Beach ၏အထင်ရှားဆုံးရေခဲတောင်များထဲမှတစ်ခု၊ အံ့မခန်းသမုဒ္ဒရာမြင်ကွင်း၊ ရေလှိုင်းများရိုက်ခတ်ခြင်းနှင့်မေးရိုးကျသောနေဝင်ချိန်တို့ဖြင့်
Pier 14 ကို Bryan Devereux ကပိုင်ဆိုင်ပြီးအနီးအနားရှိအခြားစားသောက်ဆိုင်များနှင့်မတူတစ်မူထူးခြားသောစားသောက်မှုအတွေ့အကြုံတစ်ခုအတွက်ဂုဏ်ယူသည်။
နေ့လည်စာကိုစားသောက်ဆိုင်သို့လာရောက်လည်ပတ်သူများသည်အလွန်ကြီးမားသောငါးအသားညှပ်ပေါင်မုန့် (သို့) ဂဏန်းကိတ်မုန့်အသားညှပ်ပေါင်မုန့်ကိုနမူနာယူနိုင်ပြီးညနေပိုင်းဧည့်သည်များသည်ကြက်ကြော်အစပ်၊ ငုံးသားပန်းကန်ပြား (သို့) flounder ပန်းကန်တို့ကိုရွေးချယ်သင့်သည်။
1306 North Ocean Boulevard, Myrtle Beach, South Carolina, Phone: 843-448-6500 တွင်တည်ရှိသည်။
North Beach ရှိ ၉.၂၁ ပင်မ
North Beach တွင် ၂၁ ပင်မ ၎င်းသည်ထူးခြားသောဟင်းလျာများနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောနေရာများအတွက် ၂၅ နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုထုတ်ကုန်ဖြစ်ပြီး Long Island နှင့် Manhattan ရှိကျော်ကြားသော caterer Lovin 'Oven Caterers တို့ကပိုင်ဆိုင်ပြီးစီမံထားသည်။
Main menu ၂၁ ခုတွင် ၂၈ ရက်သားခြောက်အသားများနှင့် Myrtle Beach တွင်ရနိုင်သောအကောင်းဆုံးနှင့်လတ်ဆတ်သောပင်လယ်စာများပါ ၀ င်သည်။ Grand Strand တွင်အကြီးမားဆုံးဆူရှီကျွေးသောစားသောက်ဆိုင်သည်နာမည်ကြီးသည်။
North Beach ရှိ ၂၁ Main သို့လာရောက်လည်ပတ်ခြင်းသည်သူတို့၏ခါးပတ်အောက်တွင်ဂုဏ်ထူးများစွာနှင့်သူတို့လုပ်သောပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်ဟင်းလျာများကိုအလေးထားမှုတို့ဖြင့်ထူးချွန်သောညစာစားပွဲကိုပေးသည်။
719 North Beach Boulevard, North Myrtle Beach, South Carolina, Phone: 843-315-3000
10. ဆရာမ Fish Seafood Grill
၎င်းသည် Myrtle ကမ်းခြေရှိအကောင်းဆုံးပင်လယ်စာစားသောက်ဆိုင်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Mrs. Fish ၏ပန်းတိုင်သည်စားသောက်ဆိုင်မှထွက်ခွာသောအခါဧည့်သည်တိုင်းကိုဒေသခံတစ် ဦး ကဲ့သို့ခံစားစေရန်ဖြစ်ပြီး၎င်းကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်ထားပါ။ စက္ကူပြားများနှင့်ကောင်းမွန်သောငွေထည်ပစ္စည်းများမရှိခြင်းသည်သင့်ကိုမလှည့်စားပါစေနှင့်။
Mrs. Fish ၏ထူးချွန်သောစားဖိုမှူးများသည်စိတ် ၀ င်စားစရာနေရာများကိုအာရုံမစိုက်သောကြောင့်စိတ် ၀ င်စားဆုံးနှင့်လတ်ဆတ်သောငါးများကိုသာအဓိကထားကျွေးမွေးသည်။
Mrs. Fish သည်ဒေသခံများတတ်နိုင်သမျှ ၀ ယ်ယူသည်၊ ၎င်းသည်ကြီးကျယ်သောအစားအစာများနှင့်စားသောက်ဆိုင်၏မိသားစု ၀ န်းကျင်ကိုကြိုဆိုသည်။
919 Broadway Avenue, Myrtle Beach, South Carolina, Phone: 843-946-6869 တွင်တည်ရှိသည်
မင်းဒီဆောင်းပါးကိုကြိုက်တယ်၊ အဲဒါကမင်းအတွက်တော်တော်အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ငါတို့မျှော်လင့်တယ်။ သင့်တွင်မေးခွန်းများသို့မဟုတ်အကြံပြုချက်များရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်ချက်တစ်ခုချန်ပြီးဤဆောင်းပါးကိုသင်၏သူငယ်ချင်းများအားဝေမျှပါ။
Tags:အမေရိကရဲ့အကောင်းဆုံးပင်လယ်စာမြို့တွေ, ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးပင်လယ်စာမြို့များ, ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးပင်လယ်စာ, Los Angeles တွင်အကောင်းဆုံးပင်လယ်စာစားသောက်ဆိုင်, ဖလော်ရီဒါရှိအကောင်းဆုံးပင်လယ်စာစားသောက်ဆိုင်များ, nyc ရှိအကောင်းဆုံးပင်လယ်စာစားသောက်ဆိုင်များ, ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးပင်လယ်စာစားသောက်ဆိုင်များ, ကျွန်ုပ်နှင့်အနီးဆုံးပင်လယ်စာစားသောက်ဆိုင်များ
အခမဲ့သို့မဟုတ်စျေးပေါသော Disneyland လက်မှတ်များရရန်မည်သို့ 2021 Updates
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဆီယက်တဲလ်တွင်အခမဲ့ပြတိုက်များပျော်မွေ့ရန်